UMaría Oruña kunye neLos Libros del Puerto Escondido | Uncwadi lweNdaba
Iincwadi zikaMaría Oruña
UMaría Oruña ngumbhali waseSpain othe waqaqamba kwihlabathi loncwadi ebulela kwisaga sakhe esidumileyo: Iincwadi zasePuerto Escondido. Umsebenzi we-homonymous owaqala uchungechunge ngo-2015 -Izibuko elifihliweyo- Iguqulelwe kwiilwimi ezininzi kwaye ikhokelele kwimpumelelo yezavenge ezilandelayo. Ngaphakathi kwebali lakhe kugqama umlinganiswa onengqiqo kaValentina Redondo, ogama lakhe labekwa ngenjongo yokuhlonipha umbhali uDolores Redondo.
U-Oruña umele ubuqili apho achaza khona iisetingi zemisebenzi yakhe, apho iindawo zaseSpain zinendima ekhethekileyo. Injalo impembelelo yomsebenzi wakhe kule ndawo, ukuba iBhunga leSixeko saseSuances yasungulwa ngo-2016 i Puerto Escondido Literary Route. Kuyo, uhamba kwiindawo ezahlukeneyo eCantabria ezazibalulekile kolu thotho.
1 Iincwadi zikaMaría Oruña
1.1.1 Izibuko elifihliweyo (2015)
1.1.2 Indawo yokuya (2017)
1.1.3 Apho Sasingahlulwanga khona (2018)
1.1.4 Yintoni iTide eyifihlayo (2021)
1.2 Ezinye iincwadi zombhali
2 Malunga nombhali, uMaría Oruña
series Iincwadi zePuerto Escondido
Izibuko elifihliweyo (2015)
Ipapashwe ngoSeptemba 2015, yinoveli yolwaphulo-mthetho awathi umbhali waqala ngayo isaga yakhe edumileyo. Ibali libekwe eCantabria kwaye iyelenqe livela kwizigaba ezibini: ixesha langoku kunye neminyaka yeMfazwe yaseSpain. Kwibali, u-Oliver Gordon, uValentina Redondo kunye no-Second Lieutenant Sabadelle bangabalinganiswa bexesha langoku; ngoxa kwixesha elidlulileyo kubaliswa amava entsapho yakwaFernández
UOliver wazuza ilifa lendlu yobukoloniyali — iVilla Marina ibekwe ngaselwandle eCantabria. Emva kokufa kukanina, iNgesi encinci yagqiba ekubeni iguqule indawo ibe yihotele. Ngokungalindelekanga, i-remodel kufuneka imiswe, njengoko bafumene isidumbu sosana olufihliweyo ecaleni komzobo waseMesoamerican eludongeni lwendlu.
Emva kokufunyanwa kakubi, okunye ukubulala kwenzeka kwindawo ekufutshane nesixeko, ulwaphulo-mthetho oluthi, ngokumangalisayo, lubonakale lunxibelelene.. Kwangoko, ibutho lophando loMgcini-mkhosi, elikhokelwa nguLieutenant Valentina Redondo kunye noLieutenant weSibini uSabadelle, baphuma bekhangela umbulali. Ngeli xesha, u-Oliver ufumana iimfihlo zosapho ezimsa kwixesha elinzima elizweni: iMfazwe yamakhaya yaseSpain.
Izibuko elifihliweyo (Ulwaphulo-mthetho ...
Indawo oza kuya kuyo (2017)
Sisavenge sesibini kolu luhlu. Yinoveli yolwaphulo-mthetho eyapapashwa ngoFebruwari 2017 kwaye, njengencwadi yokuqala, isetiwe kwiiSuances. Ibali lenzeka kwiinyanga emva kweyelenqe langaphambili kwaye lenzeka embindini wokubulala okumangalisayo. Kwakhona, kuya kudlala uValentina Redondo, u-Oliver Gordon kunye neqela lamapolisa.
Emva kwexesha elizolileyo kwidolophu yaseCantabria, umzimba womfazi ufunyenwe kwingqushu yesakhiwo esidala. Isidumbu sasibekwe ngokucokisekileyo kuloo ndawo, wayenxibe impahla yobukhosi bexesha eliphakathi, kwaye, ukongeza, wayenento enqabileyo ezandleni zakhe. Isiphumo sotyando lwesidumbu sothusa amapolisa kunye nabahlali balo mmandla.
Emva kwesi siganeko, kwavezwa iliza lokubulala kule ndawo, evula ii-alam kwakhona. Ngenxa yembonakalo eyoyikekayo, ULieutenant Redondo kunye noogxa bakhe kwi-Civil Guard bagqiba ekubeni baqalise ukuzingela umbulali. Ngenxalenye yakhe, u-Oliver unceda umhlobo ukuba afune umntakwabo olahlekileyo, imeko ekugqibeleni izisa iziphumo ezimangalisayo.
Apho sasingenakoyiswa (2018)
Njengabanduleli bayo, Apho sasingenakoyiswa yinto evuyisayo eyenzekayo kunxweme lwaseSuances. Yapapashwa ngo-2018 kwaye iphinda idlala uValentina no-Oliver. Ngeli xesha, iploti ayidityaniswanga neencwadi zangaphambili kwaye umxholo weparanormal wongeziwe..
UValentina ujonge phambili ekupheleni kwehlobo ukuya ekhefini kunye no-Oliver. Kodwa yonke into ijika ijonge ezantsi xa ufumana umnxeba wetyala elitsha: umgcini-myezo webhotwe leNkosi wabonakala efile. Le propati yayingahlali ixesha elide, nangona kunjalo, umbhali uCarlos Green, owayezuze ilifa lendawo, wayesandul 'ukuthutha.
Ekuqaleni, kwakucingelwa ukuba ukufa kwale ndoda kungenxa yezizathu zemvelo, kodwa uphando lwabonisa ukuba kukho umntu ochukumise isidumbu. Ithiyori ifumana amandla xa uValentina edliwano-ndlebe noGreen kwaye uyavuma ukuba uye waphazanyiswa ebusuku ngamaqumrhu angaqondakaliyo.
Nangona u-lieutenant ethandabuza malunga ne-paranormal, yena, u-Oliver, kunye neqela lakhe babanjwe kwiziganeko ezingenakuchazwa.. Oku kubakhuthaza ukuba bajongane nophando phantsi kwezinye iiparadigms, ezivelisa izinto ezifunyenweyo ezimangalisayo malunga nebhotwe kunye nabantu abantywiliselwe kwiziganeko.
Yintoni efihliweyo ngumsinga (2021)
Yeyona noveli yamva nje yombhali kunye nesavenge sokugqibela kuthotho Iincwadi ze Izibuko elifihliweyo. Ngumdlalo wolonwabo ozimeleyo apho uLieutenant Valentina Redondo kunye noogxa bakhe kumbutho wophando wamapolisa baqhubeka nokuba ngabalinganiswa. NgoNovemba ka-2021, eSpain, umsebenzi wafumana umahluko weyona ncwadi ibalaseleyo yentsomi yonyaka ngabathengisi beencwadi "El Corte Inglés".
UValentina unexesha elinzima. Ngokunxuseneyo, kwenzeka isiganeko esibi esixekweni: Judith Pombo —Umongameli wombutho wentenetya waseSantander—wabonakala efile. Umzimba wakhe wafunyanwa kwindlwana yephenyane emva nje kokuba nentlanganiso neqela leendwendwe ezikhethiweyo.
Olu phando luza kuba ngumceli mngeni kuLt. Redondo neqela lakhe, abaphinde bajongane nolwaphulo-mthetho olumangalisayo. Inenekazi elibalulekileyo lifunyenwe kwigumbi elivaliweyo ukusuka ngaphakathi kunye nokulimala okungaqhelekanga, egcwalisa inyani ngemfihlelo. Indawo ibonakala ngathi yinto ephuma kwenye yeenoveli zolwaphulo-mthetho zika-Agatha Christie okanye zika-Edgar Allan Poe.
Yintoni efihliweyo ngumsinga: ...
Ezinye iincwadi zombhali
Yincwadi yesine yehttps://www.actualidadliteratura.com/entrevista-con-maria-oruna-la-autora-de-el-bosque-de-los-cuatro-vientos/ I-Oruña, yapapashwa ngo-Agasti ka-2020 kwaye ukuza kuthi ga ngoku ngumsebenzi womntu ngamnye. Yinoveli eyimfihlakalo esetwe eSanto Estevo, eGalicia. Isicwangciso sityhileka ngamaxesha amabini: elidlulileyo-inkulungwane ye-XNUMX-nangoku, lidityaniswe ngokulandelelana kobudlelwane babalinganiswa.
Kwi 1830, UGqr. Vallejo uhamba nentombi yakhe uMarina ukuya kwiMonastery yaseSanto Estevo, eseRibas del Sil eRibeira Sacra. Kanye endaweni, indoda izimisa njengogqirha yebandla nedolophu. Kwelakhe icala, eli bhinqa liselula liya kuqhawuka phakathi komnqweno walo wokufunda ubugqirha kunye nokuchaswa koluntu ngamasiko elo xesha. Ngale ndlela baya kufumana iziganeko ezifanelekileyo eziya kuphawula ikamva.
Phantse amakhulu amabini eminyaka kamva, isazi senzululwazi ngendalo uJon Bécquer sifika kwiMonastery endala, ekhuthazwa bubuchule bakhe bokukhangela imisebenzi yobugcisa elahlekileyo. Kuloo ndawo ufunda ngentsomi yamandulo, ugcwele umdla kwaye uthatha isigqibo sokuphanda. Kodwa kwenzeka into engalindelekanga: umfana onxibe iimpahla zaseBenedictine ufunyenwe efile emyezweni wengcwele.
UBécquer ubandakanyeka kuphando lwenyani, kwaye Yonke into ibonisa ukuba okwenzekileyo kunxulunyaniswa nokuzaliswa kweemfihlo ezidlulileyo. Ukusuka apho, umntu uhlala ehamba phakathi kwee-eras ezimbini, "ibali lamakhonkco alithoba" likhona kwaye lifumana indima enkulu.
Ihlathi eline ...
Malunga nombhali, uMaría Oruña
UMaría Oruña ligqwetha nombhali waseGalicia owazalelwa eVigo ngowe-1976. Kangangeminyaka elishumi wayesebenza njengomthetho kwiindawo zabasebenzi nezorhwebo. Ngenxa yaloo mava, wapapasha incwadi yakhe yokuqala: Isandla somtoli (2013). Le ngxelo imalunga nokuxhatshazwa kwabantu abaziingcali kunye nokuba ngqongqo. Ngo-2015 uye wabonisa i-thriller Izibuko elifihliweyo, eyaqala ngayo i-saga edumileyo Iincwadi zasePuerto Escondido.
Kude kube ngoku, Olu luhlu luneenoveli ezintathu ezongezelelweyo: Indawo oza kuya kuyo (2017) Apho sasingenakoyiswa (2018) kunye Yintoni efihliweyo ngumsinga (2021). Ngokunjalo, ingqokelela yakhe incediswa ngumsebenzi ngamnye: Ihlathi lemimoya yomine (2020).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iincwadi zikaMaría Oruña
Domingo Buesa. Udliwano-ndlebe nombhali wenjikalanga eyatshisa iZaragoza